किस्ताबन्दी (पहिलो किस्ता) – मझेरी डट कम
यादव दाइ शिक्षा कार्यालयको उच्च पदका कर्मचारी हुन् । उनी अफिसको कर्मचारीहरुको दर्जामा हाकिमभन्दा थपक्कै पछिको दर्जामा पर्छन् । अफिसमा माथिकै दर्जाका भएर पनि घरमा भने उनी बिहानबिहानका भान्से मात्र हुन् । घरको व्यवस्थाअनुसार बिहानको खाना तयार गर्ने पालो उनको हो । आज पनि समयमै उनी दाल, भात तरकारी पकाउँदै छन् । उनकी श्रीमती पनि जागिरे छिन् । तर तिनी भने बिहानीको सिफ्टकी जागिरे छिन् । यसैकारण यादवजीको भात पकाउने पालो छ । दुईजनाको परिवार छ । परिवारभित्रको समझदारी अनुसार उनको खाना तयार पार्ने पालो बिहानीलाई निर्धारण भएको छ । यहीअनुसार उनी घरको धन्दाका साथ खाना तयार गर्दैछन् । आज उनले अलिक छिटो गरी अफिस जानु पर्दैछ । हाकिम नभएको कारणले आज उनैले अफिसको उच्च पदीय कार्य गर्नु पर्दैछ । भोलिदेखि विद्यालयका शिक्षकरुको अन्तर्वार्ता लिनु पर्नेछ, ती अन्तर्वार्ता दिने उम्मेदवारहरुका प्रमाणपत्रदेखि लिएर अनेकौं कुराको छानवीनका कुराहरु लगायत अरु अनेक कुराहरु मिलाउनु पर्दैछ । कर्मचारीहरुलाई धेरै निर्देशन दिएर काम गर्नुपर्दैछ ।
प्राथमिक विद्यालयका १५ ओटा शिक्षक पदमा यतिका धेरै उमेदवारले दर्खास्त दिनु र परीक्षामा पनि उत्तीर्ण हुनुको अर्थ देशभरि बेरोजगारीको संख्या अत्यधिक भएको कुरामा उनी सोचिरहेका छन् । यिनै कुराहरुका बारेमा सोच्दै भान्साको काम गरिरहेका छन् उनी । तरकारी ओइरिन्छन् । खोर्सानीको खार लाग्छ । हाच्छिउँ आउँछ । अलिकति दिक्क मान्छन् । बरु एउटा भान्छे राख्न पाए पनि ता हुन्थ्यो नि, यस्तो बेलामा ता उनलाई झाेंक पनि चल्छ । तर आफैं शान्त हुन्छन् ।
“बिहानैको जागिरे मान्छे, गइन् नि अघि नै ।” तिनका बिचमा यत्तिकै केही कुरा हुँदै थिए, भित्रबाट कुकरमा सिटी लाग्यो ।
यादवले भने– “म ता अचेल भान्से पो छु त । बस्तै गर है । दाल पाक्न आँट्यो । के काम थियो कुन्नि ?” यस्तै केही कुराहरु गर्दै यादव भित्र गए अनि भान्सामा केके गर्न थाले । सोचे– यो आइमाई किन आएकी होली ?
“खै छाड्नु सर, म गरिदिन्छु ।” यादवले थाहै नपाई उनका पछिपछि कल्पना ता भित्र भान्सामा पो आइसकिछे । भित्र आएर भान्साको काम सघाउन पो थालिछे । उनलाई कता कता अलिकति अप्ठेरो लाग्यो । “लोग्ने मान्छेहरुलाई भात पकाएको कत्ति पनि सुहाउँदैन । खोइ तरकारी कता छ ?” उसले सोधी ?
“आ छोड तिमी, तरकारी पाकिसक्यो । म गरिहाल्छु नि । तिमी जाऊ बाहिर बस ।” यादवले कल्पनालाई केही अप्ठेरो मानेझैं गरी भने ।
“केको डर नि । तिमीले मलाई क्वाप्पै खान्नौ क्यारे ।”
“उसो भए तपार्इंंं बस्नुहोस्, म खाना बनाउने आज ।”
वास्तवमा यादवलाई कल्पनाको यो व्यवहारले निकै अप्ठेरोको अनुभूति भयो । उनी अलिक विवश पनि थिए । उनले कल्पनाको बारेमा आफैंसँग तर्क गरे । घरभित्र नसोधी पसेर भान्साको काममा लागेकी छे । खाना तयार गरिदिएकी छे । कुनै अर्काे मान्छे आएर यो सबै देख्यो भने के भन्ला ? आफ्नै पत्नी आएर यो सबै देखिन् भने उनले के भनेर जवाफ दिने हो तिनलाई ? छोराछोरीले थाहा पाए भए भने अझ के सोच्ने हुन् र के भन्ने हुन् । छरछिमेकीले ता अहिले नै थाहा पाएको जस्तो लाग्छ । हे फसाद्….
उनका मनमा निकै लामो चिन्ता प¥यो । उनी यस फन्दाबाट कसरी छुट्ने हो भन्ने विषयमा निकै उपाय सोच्ने थाले । पाकेको भात खान र अरु काम गर्ने कुरा ता कता हरायो कता । उनको तत्कालीन समस्या भनेको इज्जतसँग पो देखिन गयो । यो इज्जत नै जाने समस्याबाट फुत्कने र इज्जत थाम्ने कुरामा उनले अरु केही सोच्न सकेनन् ।
आफू भला भएपछि कसैको डर मान्नु पर्दैन यादव । तँ आपूm सही ठाउँमा बस्, तेरो इज्जतलाई कसैले पनि डग्मगाउन सक्तैन । उनका अर्काे मनले उनलाई ढाडस दियो । अनि अझै अर्काे मनले भन्यो तिनलाई– अघिसम्म भान्से भए पनि हुने कुरामा तेरो सोचाइ थियो अहिले तँलाई भान्से आफैं मिलेकी छे । के हो ? तँ अहिले के डराएको……….
उनी कल्पनाको ओरिपरिबाट फुत्कने उपायको खोजीमा लागे, अनि सोच्न थाले । कल्पना भान्सामा राम्रो गरी खाना तयार गरिरहेकी छे । अनायास रुपमा आफ्नो घरभित्र पसेकी त्यस कल्पनाबाट फुत्कने प्रयासमा लाग्दालाग्दै एउटा नयाँ जुक्ति आयो उनका दिमागमा । घरको अर्काे कोठामा गएर मोबाइलबाट आफ्नै घरको टेलिफोनमा रिङ गरे । भित्र कल्पनाको कानमा टेलिफोनको घन्टी बजेको आवाज पर्नासाथ उसले भनी–“सर, टेलिफोन आयो । उठाउनुहोस् । ”
“ए, हाकिम साहेब, हजुर नमस्कार ।…..म अहिले ता भान्सामा पो छु त, बिहानको पालो मेरो हो ।”
आइहाल्नु अरे ?…… हजुर । हजुर । प्रश्नपत्र तयार पारेकै छु । दुई गाँस खान टिपेर आउँछु नि हुन्न हजुर ?…… होइन हजुर । नखाईकनै आउनू, फेरि कतिखेर आइन्छ ? घरमा कोही छैन पनि । हजुर………… हजुर……….. हजुर…. । ए लौ बितेछ । ल नआई भएनछ । म तुरुन्तै आउँछु । आइहालें ।”
“अब त्यस्तो अप्ठेरो परेपछि ता ताला लाएरै भए पनि आउँछु । अब हजुरको आदेश भनेपछि मैले मान्नै पर्छ । म आएँ । घरमा ताला लाएर भए पनि आएँ हजुर ।… हस.”
यसै बिच बैठक कोठामा लुगा फेर्दै गरेका यादवका छेउमा अचानक कल्पना आएर उभिई । यादवलाई सर्म लाग्यो । चाँडो चाँडो लुगा लगाउन थाले । अचानक मोजा लगाउन निहुरिएको बेला पारेर यादवजीको गालामाथि कल्पनाको तालो मुख आइपुग्यो । उनका नाकमा मिठो अत्तरको वास्ना अचानक छि¥यो । उनी विवश भए, त्यसबाट फुत्कने असफल प्रयत्न गर्दागर्दै कल्पनाले यादवजीलाई आफ्ना बाहुपाशमा बेरिसकी । कराउनु पनि भएन, चिच्याउनु पनि भएन, नफुत्कीकन पनि भएन, यादवजीलाई पर्नु समस्या प¥यो । कराउन् त उनैको इज्जत जाने डर । नकराउन् त यो आपत ! उनको होसले कामै गरेन । कल्पनाको शरीरभरिबाट भड्किलो अत्तरको वासना आइरहेको थियो, यादवजीलाई त्यस सुवासमा पनि दुर्गन्धको अनुभव भइरहेको थियो । यता कल्पना भने यादवजीको अनुहारभरि चुमिरहेकी थिई । मानौं कुनै भोको बाघले बल्ल बल्ल पाएको शिकार सासै नफेरी झम्टेर खाइरहेको छ । यता न उताको दोसाँधमा यादवजी त्रिशङ्कु भइसकेका थिए । खाटमा अधमरो भएर कुक्रुक्क परेर बसिरहे– विवश, निरीह । ‘यादव, लौ पार् बहाना घरबाट भाग्ने, कल्पनाबाट फुत्कने ।’ उनको अर्काे मन भनिरहेको थियो ।
निकै बेरको चुमाइपछि कल्पनामा आफैं शैथिल्यता आएको बुझे यादवजीले । कल्पनाको त्यो कार्यले यस भन्दा उताको बाटो लिएन र यो बुझेर यादवजीलाई तातो पानीले शरीरलाई छर्केर सेलाउने प्रयत्नको बोध भयो ।
अनि अन्तमा आफूलाई कल्पनाले सम्हाली । यादव भने अवाक भइरहे । कल्पनाले भनी “सर, मेरो विद्यालयको अन्तर्वार्ता राम्रो हुनुप¥यो । मेरो रोल नंं…… हो । कसै गरी मैलै पास हुनुपर्छ । म त्यति जान्दछु । मलाई थाहा छ– तपाईंकै हातमा छ मेरो पास हुनु र फेल हुनुमा । अनि मेरो हातमा छ तपाईंको इज्जत असल हुनु र खराब हुनुमा । आफैं बिचार गर्नु होला । म पास भएँ भने पनि छँदैछु र फेल भएँ भने ता झन्…। यो अहिलेको घटना मेरो स्थायी हुनका लागिको पहिलो किस्ता मात्र हो है….. बुझिराख्नुहोला । तपाईंलाई अफिसबाट बोलावट भयो क्यारे । मैले भात दाल तयार पारिदिएकी छु । यसो एक गाँस टिपेर नै जानु होला ।”